Fampiroboroboana ny Indostria Any Korea Atsimo ny minisitra Guy Rivo
Manao fitsidihana any Korea Atsimo ny minisitry ny Indostria Guy Rivo Randrianarisoa amin’izao ho tohin’ny ny « Semaine de Corée » natao teto
Fikirakirana vola anaty finday Manomboka mahazo vahana eny amin’ny banky
Manomboka miroborobo ary mizotra mankany amin’ny fikirakirana vola anaty finday ny eto Madagasikara.
Rindrambaiko « Openflex » Nozaraina maimaimpoana nandritra ny FIA
Nandray anjara mavitrika tamin'ny andiany faharoan'ny FIA na ny « Foire Internationale de l'Agriculture » ny 13-16 septambra lasa teo tao amin'ny Zone Forello Tanjombato ny Openflex,
Fitrandrahana monazita ao Tolagnaro Tena mampidi-doza, hoy ireo solontenan’ny mponina
Ankoatra ny tsy fandoavana ny onitra (compensation) ataon’ny orinasa QMM dia nanao fanambarana indray ny solontenan’ny mponina sy ny mpiaro ny zon’olombelona omaly alarobia 19 septambra tetsy amin’ny Hotely Telozoro Andrefanambohijanahary .
Famokarana angovo “Aleo hisy ny fifaninanana”, hoy i Saraha Rabeharisoa
Ny 80%-n’ny fianakaviana malagasy no mbola mahandro sakafo amin`ny afon-tsaribao.
Fanofana fiara mandeha vakansy Ny vahiny no tena betsaka
Nanomboka omaly ny fanadinana bakalorea ary ho tapitra ny alakamisy ho avy izao.
Lalana eto Madagasikara Tsy arakaraka ny velaran-tany
Anisan’ny nampiavaka ny filoha Marc Ravalomanana ny fanamboaran-dalana nataony tamin’ireny taom-piasana ireny.
Tsy misy maharatsy ny ZES satria anisan’ ny tetika nampandroso firenena an-dalam-pandrosoana maro izany ary isan’ny voalohany nampihatra an’izany i Sina ka nanaraka azy tao aoriana i Malaysia, Indonesia, Vietnam…
Ny teo anivon’ny Emergence Madagascar dia nanambara mihitsy fa “mety ho zava-doza ny tsy fitsinjovana ny tombon-tsoan’ ny teran-tany satria mety misy ny fakam-panahy andeha hampanofa tany sy hivarotra tany ao anatin’ny varotra feno izay no vahiny no hametraka ny lalànany ao anatin’ io. Raha tsotsorina dia karazana “promotion immobilière” io tetik’asa io ka avy eo ilay “promoteur” na “développeur” no mpanajary ny tompon’ilay tany mandritra ny fotoana maro na koa mandritra ny fotoana voafetra. Ny olana tena goavana dia ny zavatra ateraky ilay lalàna eo amin’ny And. 51 izay manome alalana ho an’ilay “developpeur” hanofa tany azo havaozina mandritra ny 30 taona. Tokony ny fanjakana ny “développeur” fa mijanona miara-miombon’antoka amin’ ireo vahiny fa tsy tonga dia omena an’ny vahiny. Izany hoe rehefa afaka manofa 30 taona azo havaozina dia lasa ny vahiny ilay faritra ara-toekarena manokana.”
Ny teny fanaovana ZES amin’ny lalàna dia tokony misy fitsipika na “règlementations” mamehy fampiasam-bola eto Madagasikara. Mipetraka eto ny fanontaniana hoy Alain Mahavimbina, lehiben’ny faritra atsinanana nandritra ny fitondrana tetezamita: “Voafehy isika ve ny lalàna pitsopitsony mifehy an’izany ZES? Moa ve voafehy isika hanaraka ny fepetra izay apetrak’isika mba hahatongava amin’izany tombon-tsoa iombonana izany. Misy hifandraisana amina firenena roa faharafakeliny ary tsy maintsy jerena ny sisin-tany frontières. Tsy maintsy haintsika koa no manaraka izany fitsipika izany. Raha vao misy tsy fifanarahana amin’ny roa tonta rehefa tsy misy hahazahoana tombony dia ahiana hiteraka zava-doza. Tsy tokony ny governemanta no mikonokonina izany lalàna mifehy ny ZES io fa fitsapahan-kevi-bahoaka no tokony hatao fa tsy tokony avoaka avy amin’ ny parlementera. Tokony zaraina 60/40 ihany koa ny tombony mba hisy arofanina ho an’ny Malagasy.Raha toa ka tsy misy izany dia ireo mpamatsy vola no voaaro amin’ilay lalàna mifehy ny” grandes mines”” . Samy manahy ny amin’ny mety hisian’ny korontana sy krizy vaovao ireo mpahay lalàna sy toekarena ireo raha ny nambarany .